Xa iMfazwe Yehlabathi I yaphantse yashiya ngaphandle kwe "Lord of the Rings" | Uncwadi lwangoku
Xa iMfazwe Yehlabathi I iphantse yashiya ngaphandle kwe "Lord of the Rings"
Amajoni ase-Bhritane aqala ukuhlawula ngexesha ledabi laseSomme.
Le ntlekele ayinantlonelo yinto esele siyivile ngexesha elithile. Akumangalisi ke ngoko ukuba xa sifunda ngobomi bomlinganiswa okanye, ngokulula, sihlalutya obethu, siyothuka yindlela izinto ezinokutshintsha ngayo ukuba enye into okanye enye yenzekile ngexesha elithile.
Uninzi, olujamelene noku kungqubana, luyakungcangcazela kukucinga ngendawo enokwenzeka kunye nokulula kwendlela egqiba ngayo indlela yethu. Kwimeko ye, umzekelo, UJRR Tolkien, isiphelo samhlangula ngokungummangaliso kwisiphelo esibi. Into ethi, ngamafutshane, isivumele ukuba sonwabele umsebenzi wakhe kunye nehlabathi lakhe elimangalisayo.
Bekuya kuba yintoni kuncwadi oluhle ukuba lo mbhali usweleke eneminyaka engama-23? Ewe ngokuqinisekileyo, ngaphandle kwe «Hobbit " okanye "INkosi yeeRingi", olu hlobo lwaluza kuguquka ngokwahlukileyo nakwingcinga eyaziwayo, izidalwa ezinje nge ukuzonwabisa, ii-elves, ii-orcs okanye ii-dwarves, ngekhe zibekho okanye ngokulula, ziya kwahluka kakhulu.
Ewe, ewe kuphela imeko encinci yasindisa uTolkien ekufeni okuthile ngaphambi kokuba abhale iincwadi ezambeka kwi "Olimpiki" yoncwadi oluyintandokazi . Ukuqonda i-ins kunye nokuphuma koku, kuyafuneka ubuyele kwiMfazwe yeHlabathi yokuQala nakwelinye lawona mabanga abaluleke kakhulu kwaye oyikekayo kolu ngquzulwano, iDabi laseSomme.
Umbhali wase-Bhritane wabhalisa eneminyaka engama-22 eyokulwela ilizwe lakhe kwiMfazwe Enkulu. Uyenzile njengabahlobo bakhe abaninzi baseyunivesithi, bonke bezimisele ukukhusela ilizwe labo. Umsebenzi, ke ngoko, waba noxanduva kuphela kwisigqibo esikhulu kangako, urhuqa, ngale ndlela, amawaka abantu abatshatileyo baya esihogweni semfazwe.
Yaba yinxalenye, emva kwayo ukubhaliswa, komkhosi we-11 we-Rifle Regiment I-Lancashire. Umkhosi apho wajoyina khona njengegosa ngenxa yenqanaba lentlalontle kunye nezifundo zakhe. Ngale ndlela, emva kwexesha lokufundisa, yeza ngaphambili ngo-1916 ilungele ukuthatha inxaxheba kumlo omkhulu weSomme.
Eli dabi, lelona lelide nelinegazi kukhuphiswano, laphelisa ubomi bamadoda angaphezu kwesigidi. I-Apocalypse yokwenyani apho uTolkien wayebandakanyeka khona ngokungathi ivela kwi umziba en UMororor ibiyi.
Ukuba inyani elula yokuba kule meko yenza ukusinda kombhali wexesha elizayo kujinga kumgca ococekileyo. Ngexesha loluhambo olunjengomlo, kwenzeka isiganeko esathi ngokuqinisekileyo sathambisa intsalela kwicala lobomi sokwenzakalisa ukufa okuqinisekileyo emfazweni.
Inqaku kukuba, phakathi kwesi sithuba sothusayo, udaka, ukufa kunye nentshabalalo, isimilo sethu sagula kakhulu rhoqo phakathi kwamajoni axineneyo emseleni. Umkhuhlane kunye nobuthathaka kwabetha uTolkien emnyanzela ukuba ashiye isikhundla sakhe ngaphambili. ngenxa yesi sifo kuthiwa, ngokuchanekileyo, "umsele".
Ngesi sizathu, wahanjiswa yinkampani yezigulana ezingama-75 ukuya ngasemva kwaye ukusuka apho waya kuloliwe we-ambulensi wabuyela kwisiqithi sakhe. Eyona nto inomdla kukuba, ngelixa yayisenzeka loo nto, umlilo odubulayo kunye neziqhushumbisi ezinkulu zachitha ibutho lakhe, ngokutshabalalisa onke amaqabane akhe..
Oku kwenzeke kwiintsuku ezimbalwa emva kokudluliselwa kwakhe ngasemva. Ngesi sizathu, Asinakunceda kodwa sicinge ukuba bekuya kwenzeka ntoni ukuba ukuhanjiswa kwakhe kulibazisekile ixesha elide ngokwaneleyo ukuba libandakanye umbhali kwezi bhombu.. Kufuneka kuthiwe kubo, kubo bonke abahlobo bakaTolkien, inye kuphela ikwazile ukusinda emfazweni. Idatha esinceda siqonde inkohlakalo kunye nokufa okuphezulu kweMfazwe Enkulu.
Ungquzulwano aluzange luphumelele ukumsusa kodwa lube nefuthe elibonakalayo kwi "Lord of the Rings." Iinkalo ezinjengokuhamba kuka Frodo ukuya phambili UMororor (ngaphambili), ubudlelwane phakathi Frodo y Sam (ubudlelwane obuhleliyo phakathi kwamagosa kunye namajoni abo abancedisayo) kunye nezidalwa ezoyikekayo (oomatshini bemfazwe bazo zonke iintlobo) zinxibelelene ngokupheleleyo namava abo kunye namava anjengemfazwe.
Ngaphandle kwamathandabuzo, imfazwe iphantse yenza ukuba umhlaba ungaze wazi "umhlaba ophakathi" kunye nezidalwa ezihlala kuwo. Ngayiphi na imeko, ngaphandle kwale mfazwe inye, ngokuqinisekileyo ibali beliya kwahluka kakhulu kwaye u-JRR Tolkien ngekhe akwazi ukuyila ilizwe elinomdla kangaka kwaye liqhubeka nokuthimba izigidi zabantu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » Xa iMfazwe Yehlabathi I iphantse yashiya ngaphandle kwe "Lord of the Rings"
Enkosi kakhulu uRicardo. Inyani yile yokuba baninzi ababhali abathi, ngaxa lithile ebomini babo, baba ngamajoni. Imisebenzi emibini ukuba imbali idibanise amaxesha amaninzi kunokuba sicinga kwaye siza kuphawula kwizithuba ezizayo. Ihagi.
UFUNDILE AMANQAKU E-KIPLING KWI-PGM KUNomdla KAKHULU UKUBA UPAPASWE NGU-FORCOLA
Ewe, bandinike kutshanje kwaye bendiyithanda kakhulu. Inyani yile yokuba bendihlala ndinomdla ngakumbi kwiMfazwe yesibini (II) yeHlabathi kodwa iya kuba ngumcimbi weminyaka embalwa endiye ndajika kakhulu ndayifunda malunga neMfazwe Enkulu. Kunganzima kum, okwangoku, ukuchaza ukuba yeyiphi kwezi mpikiswano ibangela umdla ngakumbi kum hehehe
IIMBAMBANO EZIMBINI ZENZA INZALA ENGAKUMBI, NDIKWENZA NJENGE-SGM. INCWADI KAHART YAYE BONA INGCACISAYO KUWE IYAVAKALISWA KAKUHLE KUNYE NENKQUBO NDINESI-2 VOLUME EDITION
Ndiyibhala phantsi, enkosi ngengcebiso. Ngoku ndifunda u-Antony Beevor wase-Ardennes.
IPHUMELELE NGEENTSUKU NGOKUMELANA NESI-FRENCH ENDIZA KUYITHENGA NAMHLANJE YIMFUNDO ENCINCI KAKHULU kwaye NGOKWENZEKA KAKHULU IVAKALISIWE KWI-TAURUS KUKHO KANYE KUKHULU KAKHULU KODWA KUYENZA
Udliwanondlebe noDolores Redondo, ophumelele imbasa yePlaneta Award yowama-2016
Usuku lwaBabhali. Zingaphi esizifundileyo?